» यसरी गर्नुहोस् ११ दिनमा पैसा डबल
२२ असार २०७७, सोमबार १५:०४
मकवानपुर, २२ असार । लोकप्रिय मोबाईल वालेट ‘खल्ती’ ले ११ दिनमा पैसा डबल अफर ल्याएको छ । यो अफर अन्तर्गत सहभागी हुने प्रयोगकर्तालाई आफुले लगानी गरेको रकम बराबरको थप रकम प्राप्त हुने खल्ती टिमले जनाएको छ । यस अफरमा तपाई रु १० देखि ५०० सम्म लगानी गर्नसक्नुहुन्छ । जुलाई १ देखि सुरु भएको यो अफरमा सहभागी हुनेहरुमध्येबाट ५० जनाले जुलाई १२ तारिखमा आफुले लगानी गरेको बराबरको थप रकम आफ्नो खल्ती खातामा प्राप्त गर्नेछन् । यसमा सहभागी भएर जित्न नसक्नेहरुको पैसा भने जुलाई १५ तारिखसम्म जतिको त्यति नै खल्ती खातामा फिर्ता हुनेछ । कसरी गर्ने त खल्तीमा पैसा डबल ? आउनुहोस् यस बारेमा जानकारी लिऔँ । प्रयोगात्मक जानकारीकालागि यो भिडियो हेर्नुहोस्–
सबैभन्दा सुरुमा तपाईको खल्ती वालेटमा जानुहोस् र ‘बजार’ भन्ने अप्सनमा थिच्नुहोस् । त्यहाँ सुरुमै ‘खल्ती पैसा डबल अफर’ भन्ने अप्सन देख्नुहुनेछ । अब त्यसमा थिच्नुहोस् । त्यसपछि खुलेको जानकारीको तल ‘अमाउन्ट’ भन्ने अप्सनमा तपाईले लगानी गर्न चाहानुभएको रकम रु १० देखि ५०० भित्रमा जति चाहानुहुन्छ त्यति लेख्नुहोस् । तल रहेको ‘रिमार्क’ अप्सनमा ‘पैसा डबल अफर’ भनेर लेखिदिनुभए हुन्छ । त्यसपछि ‘नेक्स्ट’ भन्ने अप्सनमा थिच्नुहोस् । र अन्तिममा रहेको ‘प्लेस अर्डर’ मा थिच्नुहोस् । त्यसपछि आएको जानकारीमा ‘ओके’ भन्ने अप्सनमा थिच्नुहोस् । त्यसपछि ‘अर्डर सक्सेसफुल’ भन्ने जानकारी आउनेछ र त्यसमा ओकेमा थिचिदिनुहोस् । यसरी तपाई यो अफरमा सहभागी हुनसक्नुहुन्छ ।
अब तपाईले केही गर्नुपर्दैन । केबल १२ गते यसको रिजल्ट भएसम्म कुर्नुभए हुन्छ । यस बारेमा थप केही जानकारीहरु तपाईलाई दिनचाहान्छु । यो अफरमा तपाई एक पटक मात्र होईन पटक पटक गरी पैसा जम्मा गर्नसक्नुहुन्छ । यो अफरमा खल्तीका कुनैपनि प्रयोगकर्ता वा एजेन्टले सहभागी जनाउनसक्छन् । यदि तपाईले केवाईसी भेरिफाई गर्नुभएको छैन भने ११ जुलाईसम्म तपाईले केवाईसी भेरिफाई गरिसक्नुपर्नेछ । यो क्याम्पेनको मुख्य उदेश्य डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग बारे सिकाउन प्रयोग कर्ताहरुलाई आकर्षित गर्नु हो । यस बारेमा थप जानकारी तपाईले खल्ती टिमबाट ईमेल, मोबाईल नम्बर र फोन नम्बरबाट पनि प्राप्त गर्नसक्नुहुनेछ । यस बारेमा थप जानकारी चाहिएमा कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । हामी तपाईलाई जवाफ दिने कोशिस गर्नेछौँ । आदरणीय दर्शकविन्द, तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । भिडियो उपयोगी लागेमा अरुलाई पनि शेयर गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।
व्यञ्जन गृह रेष्टुरेन्ट हेटौँडाकालागि कर्मचारी आवश्यकता
प्रदेश दैनिक हेटौँडाका लागि वितरक आवश्यकता